फाेटाेमा देखिए जस्तै हसिला र खुसि छन त तिम्रा बा ? - Digital Khabar
फाेटाेमा देखिए जस्तै हसिला र खुसि छन त तिम्रा बा ?
याेगेन्द्र खरेल, २३ भदाै, लिस्वाेन पाेर्चुगल । ६ सेप्टेम्बर २०२१ काे स्थानीय समय अनुसार बिहान करिब ९ बजे निद्रादेबिकाे काखबाट ब्युजिए । निद्रा बाट ब्युजेपछिकाे मेराे पहिलाे काम न्युजहरु हेर्ने दैनिकी जस्तै बनेकाे छ । त्यसपछि फेसबुक खाेलेर हेर्दा थाहा भयाे आज बा´काे मुख हेर्ने दिनरहेछ । सयौं काे सङ्ख्यामा सुकिलामुकिला, मुसुक्क हाँसेका, दुखपिडा बेदनाबाट मुक्त भएका विभिन्न सन्तानकाबा´ हरुकाे दर्शन गर्ने अबसर पाए ।
आफू संग भएकाबा ´का फाेटाहरु मध्येको सबैभन्दा राम्रो फाेटाेहरुलाई इडिट गरि सजाएर फेसबुकमा राख्दै हेप्पि फादर्स डे भन्दै प्रायःजसो सन्तानहरुले फादर्स डे मनाइरहेका रहेछन । यी तस्बिरहरू हेर्दा लाग्थ्यो अब नेपालमा दुखिपिडित बा´ हरु नै छैनन । घेराे फाटेकाे टाेपि लगाएका, चप्पलकाे तुना छुटेर टालाेले बाँधेर लगाएका, माटाे र गाेबर संग खेल्दा हातखुट्टामा फुटेेका, कपाल काट्ने ठाउँ र फुर्सद नभएर लामाे लामाे दाह्री र कपाल भएका बा´ हरुकाे तस्बिर कतै देख्न पाईएन । यी तस्बिरहरू हेर्दा लाग्छ सबै सन्तानहरुले आफ्नाबा´ हरुलाई सुखसुबिधा सबै पुर्याएछन । सबै बा हरु सुखि खुसि र हसिला भएछन । यहि र यस्तै सन्देश दिइरहेका थिए ती तस्बिरहरूले ।
प्रदेशकाे ठाउँ कामकाे व्यस्तताकाे कारण आजबाकाे मुख हेर्ने दिन भन्ने बिर्सेपनि, बा लाई बिर्सेकाे थिइन । अनिवार्य काम नै परेकाे बेला बाहेक अघिपछि फाेन मा बाेल्ने खासै बानि छैन मेराबाकाे । घरमा सधै फाेन भएता पनि बा´ संगकाे कुराकानी निकै पालताे हुन्छ याे उहाँको स्वभाव नै हाे । म्यासेन्जर अन गरेँ र घरमा फाेन हानेँ, मेराे फाेन आयाे कि मलाई र मैले पनि सबै भन्दा धेरै माया गर्ने छाेरि सुप्रियाले फाेन उठाहाल्छिन । आज बाकाे मुख हेर्ने दिन भन्ने उनलाई थाहा रहेछ सायद त्यसैले पितालाई दिउ फाेन भन्दै थिईन । मैले बाआमा लाई मातापिता भनेर घरमा सम्बाेधन गर्ने भएकाले हाेला उनले लाैनुस पिता संग बाेल्नुस भन्दै फाेन लगेर ` बा´लाई दिइन ।
उमेरले ७५ /७६ काटेका ५ सन्तानका बा मेरा बा अहिले सन्तानको नाममा दुई नातिनिहरुकाे साहरा बनेर जिवनबिताइरहनु भएकाे छ । खासै राेगब्याधि नलागेका मेरा बा अहिले ढाडकाे हड्डि खिइएर निरन्तर आैषधि सेवन गरिरहनुभएकाे छ । साेफाबाट अैयाअैया भन्दै उठेर काे हाेस ? कान्छाे भन्दै फाेन हातमा लिनु भयाे । ढाडकाे हड्डि खिइएकाे भन्दै डाक्टरले आैषधि दिएकाे र आैषधि सेवन पछि केही सुधार हुँदै गएकाे छ भन्दै आफ्नाे स्वास्थ अबस्थामा काे बारे बताउदै हुनुहुन्थ्यो । हस्पिटल आउन जान निकै गाह्राे हुन्छ भन्दै गुनासाे गरिरहनुभएकाे थियाे । दुई नातिनिहरु र धेरै जसाे राेगहरुकाे सिकार भएकि जिवनसंगिनिकाे साहरा भएर बुढेसकालमा बस्नुपर्दा अब त गाह्रो गाह्राे महसुस हुन थाल्याे भन्दै गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
बा काे याे गुनासो सुन्दा म आफुले आफुलाई निकै अभागी महसुस गरिरहेकाे थिए । ५ सन्तानकाबा´ आज बृध्द र राेगि हुँदैजादाँ एक्लाे हुनुहुन्छ । ती ५ सन्तान जन्माउने, हुर्काउने, बढाउने, पढाउने गर्दा कति दुखकष्ट बेहार्नुभयाे हाेला मेरा` बा´ ले । सन्तानकाे राम्रो हेरचाह गरि हुर्कायाे भने पछि बुढेसकालमा साहारा बन्लान भन्ने सपना त्यति बेला पक्कै देख्नुभयाे हाेला । आफुले राम्रो नलगाएर, राम्रो नखाएर सन्तानकाे सुख र खुसिकाे लागि कति नङ्ग्रा खियाउनुभयाे हाेला ।
हामी गर्वमा रहदा, आमाले पेटमा, जन्मेपछि काखमा र हुर्काउने बेला हात मा समाएर तातेताते गराउनुभयाे । आमाले बरु हाम्राे बाेझ कहिले पेट कहिले काख र कहिले हात मा उठाएर थाम्नु भयाे । तर हामी आमाकाे चाहे पेटमा ,काखमा र हातमा हुदा हजुरकाे चाहिँ सधै टाउकाेमा बस्याै । हाम्रो चिन्ताकाे गह्रौ भार हजुरले टाउकाे बाहेक अन्यत्र सारेर थाम्न पाउनु भएन । हाम्रै लागि साेच्दासाेच्दै आफ्नाे जवानि बिताउनुभयाे । हाम्रै पिरचिन्ता कै बिच आफ्नाे बृध्दअबस्था बिताइरहनुभएकाे छ। र पनि कहिल्यै हामिप्रति केही गुनासो गर्नुभएकाे छैन । हजुर कति महान हुनुहुन्छ है मेरा `बा´ ।
आफ्नि बुढि संग घन्टाैघन्टा फाेनमा बाेलिरहेन तर बाआमा संग नबाेल्ने गर्दा पक्कै पनि नरमाइलो लाग्छ हाेला तर कति सजिलै भनिदिनुहुन्छ है केही छैन जसरि भएपनि सन्चाेबिसन्चाे थाहा भए त भैगाे नि । तपाई लाई पनि सन्तान संग आफ्ना दुखपिडा बिसाउन मन लाग्छ हाेला हैन र ? आफू बिरामी पर्दा चिसोताताे मिलाएर खान दिने एउटा सन्तान संगै भइदिए हुन्थाे भन्ने लाग्छ हाेला । तपाईंको मन भित्र हामी प्रति पक्कै धेरै गुनासाेहरु छन हाेेला तर ती गुनासोहरु हामिलाई सुनाउन चाहनुहुन्न किन कि हामी प्रतिकाे तपाईंकाे मायामा रत्तिभर कमि आएकाे छैन । जति नै ठुला भए पनि अझै हात समाएर मेलापर्व पधेराे सम्म पुर्याउने उमेर कै छन भन्ने साेच्नुहुन्छ हाेला ।
यति धेरै पीडाकाे बिच हाम्रो लागि जवर्जस्ति ङिच्च हाँसेर खिचेर पठाएको फाेटाे राखेर , हेप्पि फादर्स डे भन्दै फेसबुकमा राख्ने हिम्मत गर्न सकिन । जुन बा लाई बास्तबिकरुपमा हेप्पि राख्न सकेकाे छैन , उहीँ बा काे फाेटाे फेसबुकमा राखेर कसलाई देखाउ ।
बा लाई विभिन्न उपहारहरु दिएर, केक काटेर, टीका माला लगाएर बा लाई चारै तिरबाट सन्तानहरुले घेरेर खिचेका फाेटाहरु सामाजिक सन्जालमा छरपस्ट छरिएका छन । आजकाे दिन बाहेक अघिपछि कहिल्यै बा लाई भजनकृतन तिर्थवर्त लगेका फाेटाेहरु हालेकाे देखिदैन तर एक्कासि बा काे मुख हेर्ने दिन यस्ता फाेटाेहरु हालेर हेप्पि फादर्स डे भन्दै फाेटाे राख्नेहरुले बा लाई वास्तव मै हेप्पि राख्न सके हाेलान त ?
यस्तै फाेटाहरु हेर्ने क्रममा एउटा फाेटाेमा गएर मेरा आँखा टक्क अडियो, त्याे फाेटाे अरु कसैकाे नभएर मेरा छिमेकी बा काे रहेछ । उनी दुई छाेरा का बा हुन । छेाराहरु सानै हुदा आफ्नि धर्मपत्नि गुमाएका ती बा ले छाेराहरुले दुख पाउँछन् भनेर अर्काे बिहे नगरि बसेका रहेछन । सानासाना छाेराहरुलाई बा र आमा दुबैकाे माया दिएर हुर्काएका ती छाेराहरु मध्ये एक बैंकका हाकिम छन भने अर्का व्यावसायि छन। दुबै छाेराकाे बिहेपछि सन्तान पनि जन्माएका रहेछन । बुहारि पनि एउटि जागिरे र अर्कि ब्युटिपार्लर खाेलेर बसेकि रहिछन । म नेपाल गएकाे बेला मेराे र ती बा काे पहिलाे परिचयमा यी सबै कुरा खुलाएका थिए ती बा ले ।
तीन तले पक्की घर वरिपरिबाट वाउन्ड्रि घेरेकाे,र चारै तिर गमलामा फुलहरु राेपिएकाे दुई वटा कार र दुईवटा स्कुटर पार्किङ गरिएकाे घरका मालिक रहेछन ती बा । मैले मनमन मै साेचेँ , दुबै सन्तान संगै भएका निकै भाग्यमानी रहेछन ती बा निकै राम्रो हेरचाह गरेका छन हाेला सन्तानहरुले तर आफू त के गर्ने रहर भनुँ या बाध्यता , बिवशताले बिदेशीन बाध्यभएकाे म कसरी बाआमाकाे सेवा गर्नु । भन्दै आफू र आफ्ना बा लाई अभागी साेच्दै ती बा लाई निकै भाग्यमानी साेचेकाे थिए ।
ति बा र मेराे निरन्तर भेटघाट र कुराकानि भईरहन्थ्याे । भेटघाट बाक्लो हुँदै जादा हामी बिच सामिप्यता पनि बढ्दै गयाे । एक दिन ती बा ले भन्दै थिए, तिम्रा बाआमा त कत्ति भाग्यमानी है । बुढाबुढि नातिनिहरु संग बसेका छन, आफ्नै बैंक खातामा पैसा छ चाहेको बेला चाहेका चिज ल्यायाे खायाे न कसैकाे किचकिच निकै आनन्द छ है भन्दै थिए । अनि मैले आश्चर्य मान्दै साेचे अनि तपाईं नि तपाईं ? तपाईं के अभागी हेा त ? सन्तानको साथमा हुनुहुन्छ, आलिशान घर छ ।घरमै शानदार गाडिहरु छन । नातिनातिना सबै परिवार संगै हुनुहुन्छ । अनि तपाईं कसरी अभागी त ? मेरा कुरा भुइँमा खस्न नपाउदै बा मलिन अनुहार बनाउदै बाेले : बाबू सबै म संगै छन तर म एक्लै छु । बा काे याे शब्द सुनेपछि मलाई निकै नरमाइलो महसुस भयाे । बा ले ती छाेराहरु हुर्काउदा पढाउदा भाेगेका दुखहरु देखि लिएर आज उनिहरुबाट सहेकाे पीडा सम्म सबै सुनाए । यी सबै पिडाहरु सुन्दा मेरा आँखा रसाइरहेका थिए । तर बा सामान्य नै थिए सायद उनलेे सबै प्रकारका दुखपिडा पचाइसकेका थिए हाेला ।
उनी भन्दै थिए दम काे राेगि म हिजाे बिहान दमले अल्लि बढी च्याप्याे , श्वास फेर्न केही गार्‍हो भयाे दुबै छाेराहरुलाई भनेँ , जेठाे निस्केर गाडि चढ्दा नानि भनेँ भन्याे कान्छाले लैजान्छ हस्पटल भन्दै गाडि चढेर सुइकियाे । कान्छाे गाडिमा बस्ने बेला बाबू भने आज म बिजि छु दाईलाई फाेन गरेर भन्छु हस्पिटल लैजान भन्दै गाडी स्टार्ट गर्याे र सुइकियाे । अब म बुढाे खै के गरु । राम्रो संग आँखा पनि देख्दिन । बाेलेकाे राम्रो संग बुझ्दिन कहाँ जाउ के गरु। पल्लाेघर नानीलाई दमकाे आैषधि ल्यादेउन भनेर खाएँ । गाडि छ तर मेराे लागि छैन , सन्तान छन तर मेरा लागि छैनन । बरु बृध्दाआश्रम जान पाए बरु आनन्द हुन्थ्यो हाेला बाबु । सबै छ तर केहि छैन, सबै छाै तर एक्लै छु भन्ने ती बा काे फाेटाेेमा आज मेरा आखाहरु टक्क अडियो , शानदार घरकाे पुर्ण सजावट गरिएको बैठक कक्ष , ठुलाे हेप्पि फादर्स डे भन्ने लेखिएको केक , वरिपरि फलफूल, हजारका नाेठहरु, टीका माला मिठा मिठा परिकारहरु । बिचमा ती बा वरिपरिबाट दुई छाेरा दुई बुहारी र नातिनातिना ले घेरेर खिचिएकाे फाेटाेेमा हेप्पि फादर्स डे भन्दै लेखेर पाेस्ट्याइएकाे थियाे ।
त्याे फाेटाे हेर्दा जाे काेहि ले सजिलै भन्न सक्थे , क्या भाग्यमानी बा । तर ती बा काे यथार्थता फेाटाेमा देखिएकाे थिएन । त्याे फाेटाेमा जे देखिएकाे थियाे त्याे केबल देखउन का लागि मात्र थियाे । ती बा त केबल मुटुभरि पीडा लुकाएर ङिच्च हाँसेजस्ताे गरेका थिए । तस्बिर खिच्ने बेला ती बा काे मुख हाँसेर जस्ताे देखेपनि मन निरन्तर राेइरहेकाे थियाे ।
अब सबै सन्तानहरुलाइ साेध्न चाहन्छु , जसरी मुसुक्क हासेकाे , सदैव खुसि देखिएकाे फाेटाेहरु तिमिले फेसबुकमा राखेका छाै , के साेहि बराबरको खुसि र सुख दिन सकेका छाै त ? के तिम्रो ध्यान त्यतातिर छ त ? यदि यसाे छैन भने कसलाई देखायाै त याे फाेटाे राखेर ? यस्ता फाेटाेहरु राखेर अरुलाई त झुक्याउन सकाैला तर साक्षात भगवानकाे रुप बा लाई नै झुक्याउन सकाैला त ?
बा काे फाटाे बर्षकाे एकपटक फेसबुकमा हाेईन , बर्षभरिका प्रत्येक सेकेन्ड सेकेन्ड मनमष्तिष्कमा राखाै । बाआमा भनेका देखाउने खेलाैना हाेईन सधै भरि पुजिरहनुपर्ने साक्षात देउता हुन । सक्छौँ नियमित सेवा गराै सक्दैनौं जात्रा नदेखाउ ।
देशको विकासमा निजामती कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका छ : मुख्यमन्त्री शाक्य